"Uzalwe yinkungu I: Ubukhosi bokugqibela". Eyona ndlela ingcono yokuqalisa ngoBrandon Sanderson. | Uncwadi lwangoku
M. Ukhwekhwe | | I fantasy, Inoveli
Kubo bonke ubomi bam ndifunde amakhulukhulu eencwadi zefantasy (i-epic, emnyama, edolophini, njl.njl.), Njengoko bekusoloko kuyinto endiyithandayo. Rhoqo kwenzeka kwezi meko, kwafika inqanaba apho onke amabali abonakala efanayo kum. Ndidibene nabalinganiswa kunye neemeko ezifanayo, ii-clichés ezifanayo (uhambo, into ekhanyayo, iqela, inkosi emnyama, Umngcatshi kunye nomxholo weqhawe…). Nangona kunjalo, Ubukhosi bokugqibela de UBrandon sanderson, Inxalenye yokuqala ye-trilogy yakhe Ukuzalwa kwenkungu (Mistborn)Undibonisile ukuba ubumnandi abufanga, kodwa buphila kunakuqala.
Ngelixa bendonwabela isaga efana Ingoma yomkhenkce nomlilo de George RR Martint IziKronike zooGwinti boKumkani de UPatrick Rothfuss Ngomhla wabo, khange bashiye uphawu oluhlala luhleli kum. Ndineenkumbulo ezingcono zikaMartin ngenxa yeprozi yakhe emdaka nenokwenyani (nangona wayengenguye owokuqala ukuyisebenzisa kuhlobo lwentelekelelo). I-Rothfuss ayinjalo kangako kwi-protagonist yayo UGary Stu kuye yonke into ijika kakuhle, kwaye inkaba yakhe liziko lendalo (ngokobuqu, ndizifumana ziluhlobo olunzima), nangona ndiyithanda ingoma yemibhalo yabo. Ngamafutshane: into efanayo ababhali bobabini kukuba ndiwathandile amabali abo, kodwa khange bandimakishe. Kwakungafani nokuba ndiqala ukufunda njengomntwana IHobbit de Tolkient UKhohlwa uKumkani uGudú de UAna Maria Matute. Into eyenzekileyo kum, kumashumi eminyaka kamva, nge Ubukhosi bokugqibela.
1 Oko kukukhanya ogama linguBrandon Sanderson
2 Iminyaka eliwaka uthuthu luye lwawa kwaye akukho nto idubulayo
3 Andizukuguqa phambi kothixo wobuxoki
Oko kukukhanya ogama linguBrandon Sanderson
Ukubethwa akusekho buhlungu kuba u-Reen waxhatshazwa rhoqo wayemenze womelela kwaye wamfundisa ukuba ajongeke kwaye aphuleke kwangaxeshanye. Ngandlela thile, ukubethwa kwakuzenzakalisa. Imivumbo kunye nemivumbo yaphola, kodwa iiglow nganye entsha yenza ukuba uVin abe nzima. Yomelele.
Ndinomdla kwizinto ezininzi malunga USanderson. Ukubala nje ezimbalwa, wenza ukuba kube lula ukubonakala kulula, ubhale ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo, kwaye uyakwazi ukuphefumla ubomi obutsha kuhlobo uhlobo olunzima kakhulu kwilifa likaTolkien. Kodwa ngaphezu kwayo yonke loo nto, kuyandonwabisa oko ngamazwi akhe uyavuya. Ayikushiyi ungakhathali. Uziva ngathi abalinganiswa babo bayaphila, ungachukumisa umhlaba abahleli kuwo, nokuba wahluke kangakanani na kowethu, kwaye awungekhe uyeke ukufunda isahluko emva kwesahluko. Owona mdla unyanisekileyo kunye nokuthamba ngomsebenzi wakhe unokuvakala kwiphepha ngalinye Ubukhosi bokugqibela.
Iminyaka eliwaka uthuthu luye lwawa kwaye akukho nto idubulayo
Ngamanye amaxesha ndiba nexhala lokungabi ligorha elicinga ukuba ndinguye.
Izithandi zobulumko ziyandiqinisekisa ukuba lelona xesha, lokuba imiqondiso izalisekisiwe. Kodwa ndihlala ndizibuza ukuba abanayo na indoda engeyiyo. Baninzi abantu abaxhomekeke kum… Bathi ndinekamva lomhlaba wonke ezandleni zam.
Banokucinga ntoni xa besazi ukuba intshatsheli yabo, iGorha lamaXesha, umsindisi wabo, uyazithandabuza? Mhlawumbi ngekhe bamangaliswe kwaphela. Ngandlela thile, yeyona nto indikhathaza kakhulu. Mhlawumbi, ngokunzulu ezintliziyweni zabo, bayathandabuza, kanye njengokuba nam ndithandabuza.
Xa undibona ubona ixoki?
Ngaba unokucinga ukuba bekuya kwenzeka ntoni ukuba, kwiminyaka eliwaka eyadlulayo, uSauron waphumelela iMfazwe yeRingi kwaye wazithwesa isithsaba sokuba ngukumkani-ombusi woMhlaba ophakathi? Esi siqalo, xa sithetha ngokubanzi, sisebenza ukuqonda ukuba kungantoni na Ubukhosi bokugqibela ukuba awuzange uve ngencwadi. Libali malunga ubugorha kunye nomlo onqabileyo yeqela le ska (udidi olusezantsi lwamakhoboka) ngokuchasene nezidwangube, kunye nabantu aboyikekayo INkosi uMlawuli. Malunga nemvukelo yokuzibulala ngokuchasene nobukhosi bobukumkani obubolayo, kunye nelinge lokufumana ubomi kwiplanethi efayo.
Isixeko sase Luthadel, apho uninzi lwesiqwenga "soBukhosi bokuGqibela" siphuhliswa.
Andizukuguqa phambi kothixo wobuxoki
"Uzamile," waphendula uKelsier. Ilizwi lakhe elomeleleyo, eliqinileyo lavakala kuso sonke isikwere. Kodwa awunakundibulala, Nkosi Tyrant. Ndimele into ongazange ukwazi ukuyibulala, nokuba ungazama kangakanani. Ndilithemba.
Ubukhosi bokugqibela ingaphezulu kwebali eliyintsomi. Yincwadi enenye yeenkqubo zomlingo (ulwalamano) eyiyo ngakumbi, kwaye yakhiwe ngcono, endiye ndakwazi ukuyifunda. Ikwajongana nokukhula komntu obhinqileyo. Vin, omnye wamaqhawekazi ambalwa athi aphume kwiincutshe zohlobo oluthile, kwaye azingqine eyindoda eyomeleleyo ngaphandle kokuphulukana nobufazi bakhe (njengoko kusoloko kusenzeka qho umbhali efuna ukunika umntu obhinqileyo ikrele).
Siphambi kwencwadi yeminqweno ephezulu, yokubandezeleka okungenamda, uthando olubi, ukuzincama okungafunekiyo, kunye a ukuthanda umlilo komlilo phakathi kokufa kunye nokuphanziswa. Umsebenzi kaSanderson ugcwele amaqhawe angafezekanga, njengoko UKelsier. Abalinganiswa abaya kuthi, ngamandla onyanzeliso lwabo, baya kuhlala engqondweni yomfundi kwakude kudala emva kokuba evalile iphepha lokugqibela. Ukuba uyakruqula iinoveli eziqhelekileyo zamaphupha, funda Ubukhosi bokugqibela de USanderson. Awuyi kudana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I fantasy » "I-Mistborn I: Ubukhosi bokugqibela." Eyona ndlela ilungileyo yokuqala noBrandon Sanderson.
Ukufundisa uncwadi namhlanje. Udliwanondlebe notitshala.